Hlazo lini leli? | Scrolla Izindaba
Hlazo lini leli?
UMfundisi uJerry Falwell Jr wayenguMengameli wase-Liberty University, enye yamanyuvesi amakhulu obuKhrestu emhlabeni jikelele.
Wayengumholi wokuqala wevangeli lokubuyisa uDonald Trump njengoMengameli waseMelika ngonyaka wezi-2015.
Wayenomfutho omkhulu kangangokuba abaholi abaningi abangamakholwa babemlandela futhi beseka noTrump – le ndoda eyayishade kathathu, inezindaba eziningi zokuphinga futhi iyephule kakhulu yonke imiyalo eyi-10.
Kunamahemuhemu ajikelezayo akhuluma ngezinto ezingajwayelekile ezenzeka phakathi kukaFalwell, nomkakhe uBecki kanye nendoda ehlanza indawo yokubhukuda, uGiancarlo Granda, abahlangane naye ehhotela.
Ngesonto eledlule uGanda uphumele obala eqinisekisa ukuthi uthandane noBecki iminyaka eminingi nokuthi uFalwell wayehlala ekhoneni lomuzi ebabukele beya ocansini.
UGranda ubenobufakazi bemiyalezo yombhalo kamakhalekhukwini kanye nevidiyo eveza uBecki enqunu.
UFalwell uphoqelekile ukuthi asule esikhundleni sakhe e-Liberty University.
Omunye wosomahlaya uthe uFalwell “ubenesikhathi sonke esengeziwe sokubuka umndeni wakhe.”